Bit By Bit - Okwu Mmalite - 1.5 Ndepụta akwụkwọ a
Akwụkwọ a na-aga n'ihu site na nchọpụta nyocha anọ: ịhụ omume, ịjụ ajụjụ, ịgba ọsọ ọsọ, na ịmepụta mmekọrịta ọnụ. Onye ọ bụla n'ime ụzọ ndị a chọrọ ọdịiche dị n'etiti ndị na-eme nchọpụta na ndị na-eme nchọpụta, na nke ọ bụla na-enyere anyị aka ịmụta ihe dị iche iche. Nke ahụ bụ, ọ bụrụ na anyị jụọ ndị mmadụ ajụjụ, anyị nwere ike ịmụta ihe ndị anyị na-apụghị ịmụta site na ịme ihe omume. N'otu aka ahụ, ọ bụrụ na anyị na-agba ọsọ, anyị nwere ike ịmụta ihe ndị na-agaghị ekwe omume nanị site n'ilele omume na ịjụ ajụjụ. N'ikpeazụ, ọ bụrụ na anyị ejikọta na ndị na-eso ụzọ, anyị nwere ike ịmụta ihe ndị anyị na-apụghị ịmụta site n'ile ha anya, ịjụ ha ajụjụ, ma ọ bụ debanye aha ha na nyocha. A na-eji ụzọ anọ a eme ihe n'ụdị ụfọdụ afọ 50 gara aga, enwekwara m obi ike na ha ka ga-eji ya mee ihe n'ime afọ 50 site ugbu a. Mgbe m tinyechara otu isi na nke ọ bụla, gụnyere okwu gbasara okwu ọma nke na-eweta, m ga-etinye isi zuru ezu na ụkpụrụ omume. Dị ka akọwapụtara na Preface, m ga-edebe isi ihe dị n'isiakwụkwọ ndị dị ọcha dịka o kwere mee, nke ọ bụla ga-ejikwa akụkụ a na-akpọ "Ihe gụọ akwụkwọ na-esonụ" nke na-agụnye ozi dị mkpa na ederede maka nkọwa zuru ezu. ihe onwunwe.
N'ile anya n'ihu, n'isiakwụkwọ nke 2 ("Omume na-ahụ maka omume"), m ga-akọwa ihe na otu ndị ọkachamara pụrụ isi mụta ihe n'àgwà ndị mmadụ. Karịsịa, m ga-elekwasị anya na nnukwu ihe ọmụma data nke ụlọ ọrụ na gọọmenti kere. N'ihe na-esite na nkọwa nke ebe ọ bụla, m ga-akọwa ihe iri zuru ezu nke nnukwu data data na otú ndị a na-eme nchọpụta si emetụta ikike data ndị a maka nchọpụta. Mgbe ahụ, m ga-atụle usoro nyocha atọ nwere ike iji mee nke ọma ịmụta site na isi mmalite data.
N'isi nke atọ ("Ịjụ ajụjụ"), m ga-amalite site n'igosi ihe ndị na-eme nnyocha nwere ike ịmụta site na ịgafe na-agabiga nnukwu data. Karịsịa, Aga m egosi na site n'ịjụ ndị mmadụ ajụjụ, ndị na-eme nchọpụta nwere ike ịmụta ihe ndị ha na-apụghị ịmụta n'ụzọ dị mfe site n'ichebe omume. Iji hazie ohere nke oge dijitalụ, M ga-elele usoro mmejuputa usoro nyocha nile. Mgbe ahụ, m ga-egosi otú afọ eletrik na-eme ka ọbịbịa ọhụrụ bịa ma nyocha ma ịjụ ajụjụ ọnụ. N'ikpeazụ, m ga-akọwa usoro abụọ maka ijikọ data nyocha na nnukwu isi mmalite data.
N'isi nke 4 ("Nlegharị na-agba ọsọ"), m ga-amalite site n'igosi ihe ndị na-eme nchọpụta nwere ike ịmụta mgbe ha na-agabiga na-akpa àgwà na ịjụ ajụjụ nyocha. Karịsịa, m ga-egosiputa usoro nchịkwa a na-ejighị n'aka-ebe onye na-eme nchọpụta na-emekọrịta ihe na ụwa n'ụzọ dịpụrụ adịpụ-mee ka ndị na-eme nchọpụta mara banyere mmekọrịta ndị kpatara ya. M ga-eji ụdị nyocha ndị anyị nwere ike ime n'oge gara aga na ụdị ndị anyị nwere ike ime ugbu a. Na nzụlite a, m ga-akọwa ndị ahịa na-etinye aka na atụmatụ ndị ọzọ maka ịhazi nyocha dijitalụ. N'ikpeazụ, m ga-ejedebe ndụmọdụ ụfọdụ gbasara atụmatụ ị ga - esi jiri ikike nke nyocha dijitalụ rụọ ọrụ, m ga - akọwa ụfọdụ ọrụ ndị dị na ike ahụ.
N'isi isi nke 5 ("Ịmepụta mmekọrịta oke ọnụ"), m ga-egosi otú ndị nchọpụta nwere ike isi mepụta mmekorita uka-dịka ịzụ ahịa mmadụ na sayensị ụmụ amaala-iji mee nchọpụta mmadụ. Site n'ịkọwapụta ọrụ mmemme na-aga n'ihu nke ọma na site n'inye ụkpụrụ ole na ole na-ahazi, enwere m olileanya ime ka ị kwadoo ihe abụọ: nke mbụ, a ga-ejikọta ọnụ ụlọ ọrụ ahụ maka nchọpụta ọha na eze, nke abụọ, ndị na-eme nchọpụta na-emekọ ihe ọnụ ga-enwe ike idozi nsogbu ndị yiri ka ọ gaghị ekwe omume.
N'isi nke isii ("Ethics"), m ga-arụ ụka na ndị nchọpụta enwewo ike ịmụba n'ike n'ike na ndị ọrụ na-agbanwe ngwa ngwa karịa iwu, iwu, na iwu anyị. Nchikota nke ike na abawanye na enweghi nkwekorita banyere otua esi eji ike ahu eme ihe ndi choro ihe ndi choputara na ihe siri ike. Iji dozie nsogbu a, m ga-arụ ụka na ndị na-eme nchọpụta kwesịrị ịmalite usoro iwu . Nke ahụ bụ, ndị nchọpụta kwesịrị ịtụle nyocha ha site na iwu ndị dị ugbu a-nke m ga-ewere dịka e nyere-na site na ụkpụrụ ụkpụrụ omume ndị ọzọ. M ga-akọwa ụkpụrụ anọ dị na ụkpụrụ omume abụọ nwere ike inyere nduzi ndị nchọpụta aka. N'ikpeazụ, m ga-akọwa ụfọdụ ihe ịma aka ndị a kapịrị ọnụ nke m na-atụ anya na ndị na-eme nchọpụta ga-ebute n'ọdịnihu, m ga-enyekwa ndụmọdụ bara uru maka ịrụ ọrụ na mpaghara nwere ụkpụrụ omume na-enweghị atụ.
N'ikpeazụ, na isi nke asaa ("ọdịnihu"), m ga-enyocha isiokwu ndị na-agafe n'akwụkwọ ahụ, wee jiri ha kọwaa banyere isiokwu ndị ga-adị mkpa n'ọdịnihu.
Nchọpụta mmadụ na afọ ole na ole ga-ejikọta ihe anyị meworo n'oge gara aga na ikike dịgasị iche nke ọdịnihu. N'ihi ya, ndị ọkà mmụta sayensị na ndị ọkà mmụta sayensị ga-eme nchọpụta mmadụ. Onye ọ bụla nwere ihe inye onyinye, nke ọ bụla nwere ihe ọ ga-amụta.